KIA , Optima , 2015 ,MDY – Super Seven Stars
KIA , Optima , 2015 ,MDY
Buy For 37 000$
Warranty Expiry Date 29-Augest-2020
KIA Optima 2015 Model ဖြစ်ပြီး Engine power 2.4 L / Gasoline /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade အမျိုးအစား5ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် …
KIA Pre Owned Cars ကားများအား ဝယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) ( ၁ ) နှစ် မှ ( ၃ )နှစ် အထိ အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်….
Pre Owned ကားများ အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Facebook – Super Seven Stars ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိူင်ပြီး (သို့မဟုတ်) ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
အဆင့်မြင့် Button Starter ဖြစ်သောကြောင့် သာမန် Key များကဲ့သို့သော့တံဖြင့်လှည့်ဖွင့်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်စက်နိူးစက်သတ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
LED Daytime Running Light ပါဝင်သောကြောင့်နေ့ဘက်တွင် လမ်းပေါ်၌အခြားကားများ နှင့် မတူဘဲကွဲပြားခြားနားစွာလှပနေသည်ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.LED front fog lamp မှာလည်း sport ဆန်ဆန် နှင်းခွဲမီးသေး (4) လုံးပူးတွဲ၍ထပ်မံပါဝင်သောကြောင့် ဆောင်းတွင်းအခါနှင့်
မြူဆိုင်းသော အချိန်များ၌ကား မောင်းနှင်ရာတွင် ရှေ့သို့ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Head lamp washer ပါဝင်သောကြောင့် High way ခရီးသွားလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရှေ့မီးကြီးမီးထွန်းရာတွင် အနှေုာင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဖုန်၊ အမှိုက်သရိုက် များ ကပ်ညှိနေပါက ကားမောင်းနှင်နေရင်းဖြင့် ရေဖျန်းသန့်စင်ပေးပါသည်။
Tilt & telescopic steering wheel ဖြစ်ပါသဖြင့် Steering Wheel အနိမ် အမြင့်အရှေ့၊အနောက်အနေအထားကို မိမိလိုအပ်သလိုပြောင်းလဲနိုင် ပါသဖြင့်မောင်းနှင်သူစိတ်တိုင်းကျသက်တောင့် သက်သာဖြစ်စေမည့်အနေအထားသို့လိုသလိုချိန်ညှိ၍မာင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
ပုံမှန် Steering wheel များနှင့်မတူညီဘဲ D shaped steering wheel ဖြစ်၍ Design မှာလှပဆန်းသစ်စေပြီး Steering wheel ၏အနေအထားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး (comfort)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ပုံမှန် Steering wheel အနေ အထား (Normal)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Steering ကိုအနည်းငယ်လေးသော(Spot) အနေအထား ဖြင့်သော် လည်းကောင်း မိမိစိတ်တိုင်း ကျချိန်ညှိနိုင်သော Drive Mode System လဲပါရှိပါတယ်။
ကားကို Manual gear ပြောင်းလဲမောင်းနှင်သောအခါ Steering မှလက်ရွေ့အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ Gear ကို Manual သို့ပြောင်းပြီးပါက အဆိုပါ Puddle sifter ခလုတ်ကို အတိုးအလျော့ ပြုလုပ်ရုံဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Steering ၏ဘယ်ဘက်တွင် entertainment နှင့်ပတ်သတ်သော FM/CD/Phone ပြောင်းရန် Mode နှင့် အသံအတိုးအကျယ်၊ channel ပြောင်းရန် ခလုတ်များ ပါဝင်သောကြောင့် ကားမောင်း နေစဉ်အတွင်း အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပြီးBluetooth hand Free System ပါဝင်သည့်အတွက် ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်း Bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းပြောနိုင်သဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဖုန်းပြောရင်းမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Dual-Zone full auto climate control System သည် ကား၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့် ညာဘက်ခြမ်းတို့ကို အပူချိန်ကွဲပြားစွာ ထိန်းချုပ်မှုပေးထားနိုင်သည့်အတွက် ကားတစ်စီးထဲတွင် အဲကွန်း၏ Temperature ကိုလိုသလို အရှေ့အနောက်၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ထားရှိအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အအေးဒဏ်မခံနိုင်သူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် အအေးနှစ်ခြိုက်တတ်သူ လူငယ်များ အတူတကွစီးနင်းရာတွင် အဆင်ပြေမှုများကို ရရှိစေပါသည်။
ညအချိန်ကားမောင်းနေစဉ် မိမိယာဉ်နောက်မှကား၏ မီးကြောင့် ဖြစ်စေသော မျက်စီစူးရှမှုကို ကာ ကွယ်ရန် နောက်ကြည့်မှန်းအား မှေးမှိန်၍ အလင်းပြန် မှုအားနည်စေခြင်း။ သို့သော် ဘက်ဂီယာထိုး လျှင် နောက်ရှိမြင်ကွင်းအား ပြတ်သားစွာမြင်စေရန် ထိုစနစ် အားရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန်အလင်းပြန်မှု အားပြန်လည် ရရှိစေရန်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
ကားတံခါး မှန်များအတင်အချပြုလုပ်ရာတွင် မတော်တဆ လက် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထူပစ္စည်းတစ်ခုခုမှန် နှင့် တံခါးဘောင်ကြားတွင် ညပ်သွားပါက အလိုအလျောက် ကားမှန် အားအောက် သို့ ပြန်ဆင်းသွားစေခြင်းဖြင့် ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Auto Defog Systemသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုကြောင့် ရှေ့လေကာမှန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ မှန်ရေငွေ့ ရိုက်ခြင်းများကို အော်တိုမစ်တစ် ကြည်လင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသော အန္တရာယ် ကင်းရှင်း စွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
KIA Optima ၏Sound System မှာ Infinity Sound System ဖြစ်ပြီး Speaker (8) လုံးပါဝင်သောကြောင့် Bass အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Speaker ကိုအသံကုန်ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားသောငြားလည်း အံသြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဆူညံအက်ကွဲသံလုံးဝမဖြစ်ပေါ်စေပဲကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့် မူရင်းအသံသွင်းထားသည့်အတိုင်း နားဆင်နိုင်ပါသည်။
KIA Optima ၏ကားရှေ့မှန် Wind Screen မှာနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိရောက်မှု သက်သာစေပြီး ကားအတွင်းသို့အပူဝင်ရောက်မှု လျော့ချပေးသည့် အတွက် မောင်းနှင်သူ နှင့် စီးနှင်းလိုက်ပါသူများကို နေရောင်ခြည်မှ ပါဝင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုဒဏ်မှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ခရီးဝေးသွားရာတွင်သော်လည်းကောင်း၊ကလေးသူငယ်များကို ကျောင်းအပို့ အကြိုတွက်သော် လည်းကောင်း အစားအသောက်၊အအေးဗူးများထည့်ထားရာတွင်အအေးထိန်းစေမည့် Glove box cooling system ပါရှိပါသည်။
ကားနောက်ခန်းသို့လည်း Rear Air conditioning Vent မှတဆင့် Air Con လေပေးနိုင်သည့် window နှစ်ပေါက်ပါရှိပါသည်။
Driver Seats နှင့် Front Passenger Seats တို့သည် လေပူ၊လေအေး ထုတ်ပေးနိုင်သော Air Ventilation Seats ဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတု အလိုက်သက်သောင့် သက်သာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
KIA Optima ၏ ထိုင်ခုံများမှာ Leather Seats များဖြစ်သော ကြောင့်ရိုးရိုး cloths seats ထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာသွားလာနိုင်သည့်အပြင်မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်ထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်င်ခြင်းနှင့် အနံ့အသက် ဆိုးများထွက်ခြင်း မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Rain Sensor ပါဝင်ပါသဖြင့် Windshield wipers မှာမိုးရွာသောအချိန်တွင် ကျလာသော မိုးရေစက်အနည်းအများပေါ်မူတည်၍ Wipers အနှေးအမြန် အလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် Wiper ခလုပ်ဖွင့် စရာမလိုတော့ဘဲ အလုပ်ရူပ်မှုမှသက်သာစေပြီး ကားမောင်းရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ၊ရှေ့ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။
6 Speed Automatic Transmission အပြင်Manual Transmission တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ကုန်းအမြင့်အတက်အဆင်းများ နှုင့် ခရီးသွားတောင်တက်လမ်းများတွင်လည်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
KIA Optima သည် 2.4L Gasoline Engine အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့်ဆီစားသက်သာပြီးပျှမ်းမျှဆီစားနှုန်းမှာ မြို့တွင်း ၁ ဂါလံလျှင် ပျမ်းမျှ 22 မိုင် နှင့် High way တစ်ဂါ လံလျှင် ပျမ်းမျှ 33 မိုင် မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Electric Parking Brake စနစ်ဟာရိုးရိုး Hand brake များထက် ပိုမိုအားသာချက်မှာ Manual လက်ဖြင့် ဆွဲ/ချ စရာမလိုပဲ ခလုပ်နှိပ်ရုံဖြင့် parking brake ဖြစ်ပီး ကားပြန်ထွက်လျှင် လီဗာနင်းရုံဖြင့် Auto Parking brake ဖြုတ်ပးသောစနစ်ပါဝင်ပါသည်။
ကားပါကင်ထိုးရာတွင် ကူညီပေးသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ကား၏အရှေ့တွင် Sensor4လုံးနောက်တွင် Sensor4လုံးဖြင့်အာရုံခံ၍ ဒိုင်ခွက်တွင်းအချက်ပြသော စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် ပါကင်ထိုနေစဉ်အတွင်း မတော်တဆထိခိုက်မိခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
4.3 လက်မ အရွယ်အစား Original rear view camera ပါဝင်သောကြောင့်ကားပါကင်ထိုးရာတွင်ဘေးရန် ကင်းရှင်းစွာ အလွယ်တကူကြည့်ရူ့၍ ကားပါကင်ထိုးနိုင်ပါသည်။
alloy ခြေနင်းပြားအားသုံးထားခြင်းကြောင့် ဘရိတ်,လီဗာနင်းရာတွင် ချော်ထွက်မှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကားညာဘက်သို့မဟုတ် ဘယ်ဘက်သို့ကွေ့ရာတွင် ကား ကွေ့ရာဘက်ရှိ အလွယ်တကူမမြင်နိုင်သော နေရာများအထိပါ အလိုအလျောက်မီးထိုးပေးသော Static Bending light System ပါဝင်သောကြောင့် ညအခါကားမောင်းနှင်ရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချ၍ အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
KIA Optima တွင်ပါဝင်သော Electric Stability Control System သည် Wheel Speed Sensor နှင့် Steering Angle Sensors တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ကားလက်ကိုင်၏ တည်ငြိမ်မူ နှင့် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကားမောင်းနှင်ရာတွင် Driver ထိုင်ခုံအား အဆင်ပြေပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် သက်မှတ်ပေးသည့် Set 1,2ဆိုပြီး ပုံစံ(၂) မျိုးသက်မှတ်နိုင်ပါသည်။
Super Seven Stars Motors မှမော်တော်ယာဉ် များအား အောက်ပါအချက်များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှူများ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်……
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်…….
Selling Price 37,000
30% Down Payment 11,988
Monthly Payment For 1 Year 2,313
30% Down Payment 12,247
Monthly Payment For2Years 1,231
30 % Down Payment 12,506
Monthly Payment For3Years 873